Miyaan u sahleyn karaa SEO si sahlan loogu sameeyo meheraddayda ganacsigeyga oo kali ah?
Inaad noqoto casriga casriga ah ee maareynta ganacsigaaga internetka marwalba waa mid caqli gal ah, waa in aan qirto. Maalin kasta waxaa jira hawlo badan oo mas'uul ah oo sugaya dareenkaaga saxda ah, ma aha in la xuso naqshadaynta raadinta raadinta, taas oo loo yaqaana sida run ahaantii wakhti badan qaadata. Sidaas, ma suurtogal in la ordo istaraatejiyad fudud oo SEO ah oo si fiican u shaqeeya ganacsigaaga internetka yar? Waa hagaag, aynu aragno.
Ka hor intaanaan bilaabin, waa inaad wajahdaa - adoo si fiican u shaqeynaya waa shaqo dhamaystiran oo waqti dheer ah - human resources & workforce management software. Xitaa istaraatijiyada fudud ee SEO waa marathon ah, halkii fuulin. Haa, waxaad heli doontaa talabixin tijaabo ah si aad u hagaajisid liiska boggaaga liiska Google ee natiijooyinka raadinta. Laakiin maskaxda ku hay - ma jiraan natiijooyin degdeg ah ama horumarin degdeg ah. Waa inaadan ka filaynin, inay noqoto mid sax ah. Kaliya sii wad inaad shaqeyso, waanan hubaa inaad raadinayso calaamadaha ugu horreeya ee horumarkaaga.
Nidaamka fudud ee mulkiilayaasha ganacsiga kaliya
Ugu horreyntii, suuq-geynta iyo SEO-yada farsamada ayaa had iyo jeer soo socda gacanta. Taasina waa sababta aad uhesho content tayo ah bogagga shabakadaada waa aasaaska laf-dhabarka, kaas oo badanaa go'aaminaya boggaga internetka laga bilaabo bilowga hore. Waxaan halkan kugula talinayaa inaad sameyso waxyaabahaan soo socda:
Abuuri maadooyin tayo sare leh, si sax ah ula soco hadafyada ganacsiga ee hadda, iyo rajooyinkaaga.
Qodob kasta oo qoraaga ah ka dhig mid waxtar leh, wargelin iyo dhiirigalin sida aad karti u yeelan karto
Qoraalladaaga si habsami leh u samee, si wax walba u sahlan,
Ku shaqeeya waxyaabaha ku habboon waqtigooda si aad u ilaaliso dhagaystayaasha dhageysiga - labadaba isticmaalayaasha dhabta ah iyo kuwa dhirbaaxaya
Si aad u heshid xogtaada midigta ereyada muhiimka ah iyo weedhaha muhiimka ah, waxaad u baahan doontaa inaad xakamayso cilmi-baaris muhiim ah. Laakiin ha ka baqin - ma ahan hawl culus haddii la sameeyo qalab habboon. Habkaas, waxaad awoodi doontaa inaad heshid ereyada muhiimka ah ee muhiimka ah ee macaamiisha aad u badan tahay inay u adeegsadaan raadinta. Fikradda muhiimka ah ee halkan ku saabsan waxay ku saabsan tahay helitaanka ereyooyinka muhiimka ah, oo si joogta ah u muuqda raadinta bil kasta, laakiin tartan aad u badan isla waqti isku mid ah.
Ku hay cufnaanta saxda ah ee muhiimka ah. Hayso boggaaga bogga oo ku saabsan qiyaastii 2-3 boqolkiiba celcelis ahaan. Laakin marnaba xadgudub ku ah walxaha badan ee muhiimka ah adoo si fudud u dhigaya. m Taasi ma shaqeyneyso. Intaa waxaa dheer, waxaad si toos ah u saameyn doontaa tayadaada content, taasoo keentay in aad u liidata (haddii aan eber lahayn) horumarka heerka sare.
Ha ka waaban inaad haysato erayo muhiim ah ama xitaa hal erayga muhiimka ah ee dheeriga ah ee lagu daro URL kasta oo shabakad. Sidaa oo kale, waxaad helaysaa boggaga udub-dhexaadka ah, oo aad ku martiqaado marti-gelin dheeraad ah si aad ula wadaagto boggaaga, iyo bog kasta oo aad u eegto si fiican. Dhammaanba mid.
Isticmaal hababka warbaahinta bulshada ee ugu caansan (sida Facebook, Twitter, Instagram, iwm.) si aad u hesho joogitaanka internetka oo xooggan iyo awoodda shabakadeed ee awood leh. Sidaa oo kale, waxaad u diri doontaa calaamad aad u fiican Google iyo makiinadaha kale ee raadinta ah ee aad u qalantaa inaad sare u kacdo. Ma aha in la sheego in aad gasho jidka weyn ee taraafikada ah oo inta badan ka yimaada warbaahinta bulshada.